Wararkii ugu dambeeyey rabashadaha doorashada la isku haysto ee Somaliland - Caasimada Online
Home Somaliland Wararkii ugu dambeeyey rabashadaha doorashada la isku haysto ee Somaliland
Wararkii ugu dambeeyey rabashadaha doorashada la isku haysto ee Somaliland
Muqdisho (Caasimada Onlie) – Waxaa deggan xaaladda xaafadaha ay xalay rabshado ka dheceen xalay ee ka tirsan Hargeysa iyo Burco, sida ay dad deegaanka u sheegeen warbaahinta.
Gudoomiye ku xigeenka Gobolka Togdheer, Maxamed Diiriye Xayd ayaa sheegay in ay daggan tahay xaaladda xaafadihii ay rabshadaha ka dhaceen xalay ee Burco.
Waxay arrintani ka dambeysay markii mas’uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Waddani ay dhaliil u soo jeediyeen hanaanka doorashada. Waxay sheegeen in ay hakiyeen wadashaqeyntii ay la lahaayeen guddiga doorashooyiinka ka dib markii “la dhagaysan waayay cabashadooda” ku aadan doorashadii la qabtay Isniintii.
Cusman Afgaab oo ka tirsan xisbiga Waddani ayaa sheegay “in uu jiro musuqmaasuq uu ka mid yahay in meelaha qaar lagu codeeyay warqado la been abuuray, caruur codeysay iyo in wakiilladooda laga saaray xarrumaha qaar ee codeynta”.
Gudoomiyaha guddiga, Cabduqadir Imaan Warsame oo xalay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay “wixii cabasho sharci ah, diyaar baan u nahay in aan xallino”.
Rabshada ka dhacay xaafado ka tirsan Burco waxaa “ku dhintay hal qof, tiro kalena way ku dhaawacmeen”, sida uu sheegay gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer. Dadka dhaawaca ah waxaa ka mid ah askeri boolis ah, oo ka mid ahaa kuwii ka hortagayay rabshadaha.